Forvo Madudziro emahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Zvekare zvakare tinokupa iwe kunyorera kuti kwemaawa mashoma kana mazuva, zvinoenderana neanogadzira, inowanikwa kuti utorwe zvachose mahara. Ino nguva tichaenda kutaura nezveForvo, chishandiso chinotibatsira kudzidza nekuvandudza mataurirwo edu mumitauro inopfuura makumi matatu nematanhatu. Forvo ndiyo dhairekitori repamusoro kududzira, nzvimbo yaunogona kuwana mamirioni emazwi akataurwa mumitauro yavo yekutanga. Ichi chishandiso chine mutengo wenguva dzose we 2,99 euros muApp Store, asi parizvino inowanikwa kurodha mahara.
Ichi chishandiso chakanakira pamusoro pezvose kana tiri kudzidza mutauro tisingayende chero kuchikoro uye nyaya yemadudzirwo ndiyo inotidhurira zvakanyanya. Kutenda kuna Forvo nenharaunda yaro tichakwanisa kudzidza kududza mazwi iwawo anoti kana tichiaona kekutanga tinoedza kuadana asi mhedzisiro yacho haina kumbofanana nezvazviri. Mimwe mienzaniso yerudzi urwu rwemazwi muChirungu ndiMusikirwo kana Musayendisiti, madudzirwo aro ari kure nezvatingafungidzira pasina kushandiswa kwerudzi urwu.
1 Main maficha eForvo Madudziro
2 Forvo Kududzwa kwemashoko
Main maficha eForvo Madudziro
Tsvaga izwi uye iwe unowana mataurirwo aro emunyika akanyorwa nemumwe munhu.
Anopfuura mamirioni mazana matatu nemazana mashanu ezviuru anodudzwa anowanikwa mumitauro makumi matatu nemakumi matatu nemashanu.
Enzanisa mataurirwo akasiyana nedunhu.
Inzwa manzwi echirume neechikadzi.
Chengeta nhoroondo yako yemashoko aunofarira.
Tumira mameseji nevamwe vashandisi veForvo.
Iwe unogona kunyorera rubatsiro rwevanhu vanobva kune dzimwe nyika kuti vadzidze kududzwa kweimwe nharaunda.
Zvekushanda kwechishandiso zvinoda kuti isu tivhure account paForvo.com kuti dhata redu riwiriraniswe nemamwe madivayiri.
Forvo Kududzwa kwemashoko
Kugadziridza kwekupedzisira: 20-7-2016
Saizi: 21.2 MB
Rated for makore 4 zvichikwira.
Kugarisana: Inoda iOS 8.1 kana gare gare. Inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Forvo Kutaura2,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Forvo Kududzwa kwemahara kwenguva pfupi